ဂျာမန်ထုတ်လွှင့်သူ Hessischer Rundfunk သည် mxfSPEEDRAIL နှင့်အတူယင်း၏အူလမ်းကြောင်းလုပ်ဆောင်မှုများကိုဗဟိုပြုသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဂျာမန်ထုတ်လွှင့် Hessischer Rundfunk mxfSPEEDRAIL နှင့်အတူ၎င်း၏စားသုံးမိပါစစ်ဆင်ရေး centralizes
MOG နှင့် HR
ဂျာမန်ထုတ်လွှင့် Hessischer Rundfunk mxfSPEEDRAIL နှင့်အတူ၎င်း၏စားသုံးမိပါစစ်ဆင်ရေး centralizes
MOG Technologies က, ယနေ့ Hessischer Rundfunk (HR), ဂျာမနီရှိအများပြည်သူထုတ်လွှင့်မရွေးတော်မူကြောင်းကို MXF နှင့်ဗဟိုစားသုံးမိပါဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးကြေညာခဲ့သည် mxfSPEEDRAIL ယင်း၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာပတ်ဝန်းကျင်အချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်ရေးရန်။
ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် Frankfurt, ဥရောပဗဟိုဘဏ်မှနေအိမ်နှင့်ဥရောပ၏အဓိကဘဏ္ဍာရေးဌာနတစျခုပါဝင်သော Hessen ၏တစ်ခုလုံးကိုပြည်နယ်တာဝန်ရှိများ၏က ARD အုပ်စု၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်, လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ထုတ်လုပ်မှုစိန်ခေါ်မှုများအများဆုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအိမ်များကှာခွားပါဘူး နှင့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းပါဝင်သည်:
တာဝန်များကိုအလိုအလျောက်နှင့်တစ်ဦးစံသို့ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်အချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်ရေး HD format နဲ့။
HR အဘို့, MOG ဟာအလိုလိုသိ user interface ကိုမှတဆင့်အားလုံးထည့်သွင်းသည့်စစ်ဆင်ရေး၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဖွကြောင်း, ထို mxfSPEEDRAIL F1000 မော်ဒယ်ပေါ်အခြေခံပြီးဖိုင်တစ်ဖိုင်-based system ကိုတပ်ဖြန့်ထားသည်။ ဒီဖြေရှင်းချက်, ထိုကဲ့သို့သော Panasonic က P2 အဖြစ်အပေါငျးတို့သထုတ်လွှင့် input ကိုကို formats သုံးစွဲဖို့ဒီဇိုင်းထားပြီး Sony က XDCAM, ကို Canon စံ - နှင့် AVC-အချင်းချင်းအပြန်အလှန် 100 ပုံစံသို့သူတို့ကိုငါ transcoding GoPro, HD HR မှာ format ကို - နှင့်ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်သို့ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်း။
အဲဒီမှာ Hessen ဒေသအနှံ့အများအပြားစတူဒီယိုဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, HR ယင်းသို့ရိုက်ကူးသုံးစွဲဖို့ mxfSPEEDRAIL ကိုအသုံးပြုသည် လွန်စွာလိုလားသော ယင်း၏ Frankfurt ဌာနချုပ်မှာဆက်စပ်မှုတွေ / ISIS အဖွဲ့ပတ်ဝန်းကျင်။ ဆက်စပ်မှုတွေ check-in အတူရိုက်ကူးပေးပို့ simplifying အပြင် mxfSPEEDRAIL ကရိုးရှင်းပြီးပိုင်ဆိုင်မှုများအားလုံးကိုခြေရာခံအောင်, အပေါငျးတို့သ metadata ကိုသယ်ဆောင်ရန်နှင့်မှတ်စာရေးသွင်းဖို့ထုတ်လွှင့်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ mxfSPEEDRAIL F1000 အလိုအလျောက်ဆက်စပ်မှုတွေပလက်ဖောင်းအတွင်းနာမည်ဗီဒီယိုကလစ်နဲ့ sequence ကိုထုတ်ပေးလျက်, အမျိုးမျိုးသောသတင်းရင်းမြစ်အတွက်လက်ရှိမီတာဒေတာကိုအပေါ်အခြေခံသည်။ ဘယ်အချိန်မှာလိုအပ်သောဖိုင်တွဲ / သိုလှောင်မှုနေရာများတွင်လည်းထိုအတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်အော်ပရေတာဘို့လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲအလိုအလျှောက်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
HR ရဲ့ဖြန့်ကျက်မီဒီယာအွန်လိုင်းအတိုင်ပင်ခံနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ကော်ပိုရိတ်မိတ်ဖက်အဖြစ်, မီဒီယာအွန်လိုင်း,6နှစ်ပေါင်း MOG နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဂျာမန်စျေးကွက်ချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်အများဆုံးဆန်းသစ်စားသုံးမိစွမ်းရည်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာရန်, NAB မှာ MOG သွားရောက်ကြည့်ရှု - Booth SL9324 ။
ပွင့်လင်းစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများအပေါ် အခြေခံ. နှင့်ပြည်နယ်-Of-The-Art နည်းပညာကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, MOG Technologies က ဗဟိုစားသုံးမိပါ Solutions, တိမ်တိုက်န်ဆောင်မှုများနှင့် MXF ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Tools များများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအဖြစ်ဈေးကွက်ထဲမှာသူ့ဟာသူထူထောင်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်, MOG file-based ဖို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောင်းရွှေ့နေချိန်တွင်မိမိတို့၏ Workflows ၏အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ဖို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးပေးကူညီပေးနေနှင့်စနစ်များနှင့်ပုံစံများအကြားမြင့်မားတဲ့အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါသေချာခဲ့သည်။
Hessischer Rundfunk (HR) Hessen ၏ဂျာမန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိလူထုထုတ်လွှင့်အဖြစ်နီးပါး 70 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ HR Frankfurt အတွက်ဌာနချုပ်နှင့်အတူက ARD ၏တည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ Frankfurt အတွက်ထုတ်လွှင့်ရေးစင်တာအပြင် Kassel နှင့် Wiesbaden အတွက် HR တီဗီစတူဒီယိုအဖြစ် Hessen အပေါငျးတို့သဒေသများတွင်နောက်ထပ်သတင်းထောက်ရုံးများရှိပါသည်။
1,550 န်ထမ်းများနှင့်အကြောင်းကို 925 လွတ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နှင့်အတူ, HR, အထူးသဖြင့်ရိုင်းပင်မဧရိယာများအတွက်, အရေးပါသောစီးပွားရေးကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။
Hessischer Rundfunk ယင်းက ARD မူလတန်း Channel ကို "Das Erste" အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ယဉ်ကျေးမှုအစီအစဉ်များ Arte နှင့် 3sat, ဖြစ်ရပ်, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရုပ်သံလိုင်း Phoenix, နှင့်သားသမီးရဲ့ရုပ်သံလိုင်းကိုအထောက်အကူပြုရန် KI.KA.
မီဒီယာအွန်လိုင်းဂျာမန်စျေးကွက်အတွင်းအသံလွှင့်ခြင်းနှင့်တီဗီထုတ်လုပ်မှုတပ်ဆင်တစ်ဦးဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အတိုင်ပင်ခံ, စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, စီမံခန့်ခွဲမှု, လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ရေးအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီအကွာအဝေးအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးအဆိုပါဝန်ဆောင်မှုများကို။ မီဒီယာအွန်လိုင်းယင်းထုတ်လွှင့်စျေးကွက်အတွက်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲစနစ်များ 100% ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့သာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ဈေးကွက် hr စားသုံးမိပါ အွန်လိုင်းမီဒီယာ MOG Technologies '' MXF mxfSPEEDRAIL ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2016-03-18
ယခင်: TVU ဘယ်နေရာမှာမဆို App ကိုအသုံးပြုခြင်းဘူတာသတင်းထောက်များအသံလွှင့်အိမ်နီးချင်းဆောင်းရာသီမုန်တိုင်းယောနအခြေအနေများအတွက် Snowed
နောက်တစ်ခု: ထုတ်လုပ်မှု Assistnat ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုထပ်တလဲလဲ